नेपालद्वारा मलेसियालाई २१८ रनको लक्ष्य : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks नेपालद्वारा मलेसियालाई २१८ रनको लक्ष्य
काठमाडाैं । त्रिदेशीय टी–२० क्रिकेट सिरिजअन्तर्गत आजको खेलमा नेपालले मलेसियासामु जीतका लागि २१८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गर्दै नेपालले निर्धारित २० ओभरको खेलमा सात विकेट गुमाएर २१७ रन बनायो ।
विश्व कीर्तिमान बनाउने क्रममा रहेका प्रारम्भिक ब्याटस्म्यान कुशल भुर्तेल पाँचौँ ओभरको पहिलो बलमा नै मुहम्मद वफिकका बलमा क्याच आउट भए । उनले १२ बल खेल्दै दुई छक्काका मद्दतमा १६ रन बनाए । यसअघिका तीन खेल(नेदरल्याण्डस, मलेसिया)मा लगातार अर्धशतक प्रहार गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका भुर्तेल थप नयाँ कीर्तिमान बनाउनबाट भने चुके ।
नेपालको पारिलाई कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रारम्भिक ब्याटस्म्यान आशिफ शेखले सम्हाले । दुवै जनाबीच ७३ रनको साझेदारी भयो । सो क्रममा शेखले ४२ रनको योगदान दिए । उनले ३३ बल खेल्दै तीन छक्का र तीन चौका हाने। यस्तै कप्तान मल्लले २५ बलमा एक छक्का र चार चौका हान्दै ४१ रनको योगदान दिए ।
नेपालका लागि उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३३ रन बनाए । उनले १७ बलमा एक छक्का र पाँचा चौका हाने । यस्तै करण केसीले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । उनले मात्र १३ बलमा ४५ रनको योगदान दिए । सो क्रममा केसीले सात छक्का प्रहार गरे । यस्तै कुशल मल्लले अविजित १९ रन बनाए ।
बलिङतर्फ मलेसियाका लागि फित्री साम, अनवर रहमान र सयद अजिजले दुईदुई तथा मुहम्मद वफिकले एक विकेट लिए । अहिले मलेसियाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ । मलेसियाले केही बेरअघिसम्म सात ओभरमा दुई विकेट गुमाउँदै ५७ रन बनाएको छ । नेपालका लागि दुवै विकेट सोमपाल कामीले लिनुभएको हो । मलेसियाका लागि आजको खेल औपचारिकता मात्र हो । सिरिजका पुछारमा रहेको मलेसिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ । नेपाल यसअघि नै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौको क्षेत्रपाटी स्थित होटल टिम्बर हाउसलाई अहिले आइसोलशन सेन्टर बनाइएको छ । जहाँ नेपाल घुम्न आएका कोरोना संक्रमित विदेशी पर्यटकहरु बस्दै आएका...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अंकगणितको जोडघटाउमा लागेको छ । कांग्रेसले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने अंकगणितको जोडघटाउमा...
काठमाडौं । न्यायालय विभिन्न प्रकरणमा विवादमा आइरहँदा काननुविद्हरूले न्याय परिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायाधीशलाई अनुशासनमा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार मुद्दा...
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुख गणना आउदो मंसिरमा सकिने
अर्थ राजधानी समाचारदाता - September 8, 2020 0
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलको कामले तिब्रता लिएको छ । हाल सम्म सो क्षेत्रका ५७ हजार ३५० रुख गणना...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - January 16, 2021 0
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - February 19, 2021 0
कांग्रेस र जसपाको निष्कर्ष : कुर्सी जोगाउन चालु अधिवेशन अन्त्य
Exclusive राजधानी समाचारदाता - July 8, 2020 0
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको निष्कर्ष...
प्रदेश ५ राजधानी समाचारदाता - April 26, 2020 0
नवलपुर । मस्जिद–मदरसा जिल्लास्तरिय अनुगमन समितिले पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–२ परासीको जामिया मस्जिदमा अनुगमन गरेको छ । विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल...
संक्रमणको जोखिमबीच सिरहामा उपेन्द्र र डा. बाबुरामको भीड
प्रदेश २ राजधानी समाचारदाता - July 31, 2020 0
सिरहा । प्रदेश २ कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले हजारौंको सहभागिताबीच सिरहा जिल्लाको चोहर्वामा हिजो बिहीबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रम...
रुकुमपश्चिम घटनाका दोषीमाथि कारवाही प्रारम्भ भइसक्यो : गृह मन्त्रालय
प्रदेश ७ राजधानी समाचारदाता - June 15, 2020 0
काठमाडौँ । सरकारले जातीय विभेदका घटना दोहोरिन नदिने र रुकुम पश्चिम घटनाको दोषीमाथि कानूनी कारवाही गर्न संवेदनशील रहेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - August 29, 2020 0
मेर्टिन्स नपोलीमै रहने
खेल राजधानी समाचारदाता - May 20, 2020 0
रोम । बेल्जियन विंगर तथा फरवार्ड ड्रिएस मेर्टिन्सले इटालियन क्लब नपोलीसँग सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । मेर्टिन्सले नपोलीसँग थप तीन वर्षको सम्झौता नवीकरण गरेका...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - February 5, 2020 0
सुरुङ्गा । झापाको विर्तामोड नगरपालिका–९ निवासी लक्ष्मीमाया अधिकारीले सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती गरेको अढाई वर्ष भयो । उनले फूलखेती गरेरै आफ्नो परिचय फेरेकी...
प्रकाश आचार्य - May 6, 2021